QEEXIDA SIFOOYINKA KHAFIIFINTA PEAR - GEEDKA NADDIGA
Ugu Weyn Ee Geedka Naddiga
Xoqmadda saxda ah ee saxda ah: xoqidda sifooyinka, nidaamka, qalabka
Pear waa quruxda beerta aad u dhadhan fiican leh oo faa'iido u leh carruurta iyo dadka waaweyn.
Roodhiga ku koray aagga magaalooyinka waaweyn, beeraha waaweyn iyo geedka waaweeyn. Midhaha geedka this waa mid macaan, casiir leh oo jilicsan.
Waxaa loo isticmaalaa cusub, sidoo kale loo shaqeynayo (samaynta marmalade, casiir iyo macaanka). In beerta, manjooyin geedo midho leh ayaa door muhiim ah, taas oo dhalidda iyo tayada miraha ay ku xirantahay. Dhaqanka Tani waa mid aad u jecel qorraxda, taas oo u fiican bacriminta.
Haddii aad ku fekertay wakhti go'an si loo gooyo isteroberi, waxaan isku dayi doonaa inaan kuu sheegno dhammaan sifooyinka ee manjooyin mar kasta.
Waxan ka jaray isteroberi xilliyada kala duwan: waxaan ka hadleynaa sifooyinka iyo waqtiyada mar kasta
Waxaa jira dhawr jeer oo geedo waaweyn oo geedo waaweyn ah: guga, dayrta, xagaaga iyo jiilaalka. Ujeedada manjooyin waa si loo hagaajiyo tayada miraha, si loo xakameeyo midhaha iyo koritaanka dhirta, si loo hagaajiyo iftiinka taajka, si loo soo saaro laamaha qalalan, jaban iyo kuwa jiran.
Gooyo waxay suurtogal u tahay in ay koraan geed korriin muhiim ah oo leh mashiic wanaagsan oo adag, mustaqbalka waxay awoodi doonaan inay adkeeyaan culeyska dalagga ee waaweyn, iyo sidoo kale ilaalinta wax soo saarista iyo dhirta qoryaha muddo dheer, bilaabaan fruiting in time iyo hesho miraha tayo sare leh.
Si natiijada geedi socodka manjooyin si ay u niyad jabiyaan ninkii beerta ka shaqaynayay, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo sifooyinka kala duwan ee pear kasta.
Inta badan, manjooyin guga waxaa la fuliyaa marka dhaxan soo dhaafay iyo xilli sii kordhaya weli aan bilaabin. Laakiin ereyada kale waa muhiim. Aan ka wada hadalno mid kasta oo ka mid ah.
Faahfaahin buuxda ee habka of pears manad ah guga
Sidii hore u dhignay, manjooyin guga ayaa la fuliyaa xilligan xitaa marka uu dhaxan yahay uu soo dhaafay, laakiin xilliga sii kordhaya weli wali ma bilaabin waxqabad.
Waxaan qornaa shuruucda aasaasiga ah ee manjooyin guga, si aaney u waxyeeleynin geedaha khudradda
• Si goynta loo isticmaalo qalab gaar ah oo la yiraahdo xiirto leh daabac aad u fiiqan, waayo dhirtii waaweynaa waxay isticmaalaan jajab. Ka dib markii ay ka saareen laanta geedka, qalabyada oo idil waa in lagu nadiifiyaa walxo aalkolo leh.
• Nidaamka gooyuhu wuxuu ku bilaabmaa khafiifinta taajka geedka, tan waxaa loo sameeyaa si loo hubiyo helitaanka helitaanka hawada iyo iftiinka.
• Waa lagama maarmaan in la gooyo jirridda dhexe ilaa afar meelood meel. Taas oo mustaqbalka u oggolaan doonta inay sameysanto geed naxaas ah.
• Nidaamkan xannaanaynta geedku waa in lagu sameeyaa heerkulka hawada oon ka yarayn 5 ° C.
• Ka dib marka la gooyo laamaha, meelaha la gooyey waa in la saliido. Maadooyinka soo socda ayaa ku haboon: tan saliidda ah, rinjiga saliidda, garoonka beerta iyo habka "Rannet". Dambe ayaa sidoo kale ku habboon loogu talagalay murgeysi goobaha dhaawacmay ee pear.
• Waxaa jira laba habab oo xoqin: gooyaa giraanta iyo gaabinta laamaha. Habka ugu horreeya waa sidan soo socota: gooyaa waxaa lagu sameeyaa hoostiisa, i.e. saldhigga laanta. Si looga fogaado furitaanka barkin, marka hore gooyso, ka dibna barta sare ee ugu weyn. Marka la gaabiyo laamaha, koritaanka caleemaha lateral waa la dedejiyey, iyo burooyinkeeda ku yaal hoose ee jarista ayaa bilaabaan inay soo toosaan.
• Waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo xaqiiqda ah in laamaha koritaanku ay koraan, ma ahan oo keliya, laakiin sidoo kale qadar ahaan. Laga soo bilaabo tan waxa ay soo socotaa in ay lagama maarmaan tahay in la taageero caleemaha sii kordhaya horizontal, iyo waxaa lagama maarmaan ah in laga takhaluso caleemaha gaari toosan. Laamoodyada hoose ee qasabka ah waa la jaraa, maadaama ay yaryihiin wax soo saar.
• Marka la gooyo xilliga gu'ga, waa ka mamnuuc in lagu daro Bacriminta nitrogen, tan iyo markii dhaqanka waqtigan qaadaa dhamaan nafaqooyinka ka soo baxa ciidda.
• Iyada oo ay ku jirto manjooyin saxda ah ee qoryaha, sannadka soo socda dhammaan meelihii jarista ayaa si taxadar leh u kori doona, dhaqanku wuxuu noqon doonaa mid caafimaad qaba waxana uu bilaabi doonaa inuu bixiyo dalag hodan ah.
Manjooyin kuleylaha xagaaga: waa maxay nidaamkan?
Geedka qoraxda ee dhirta waxaa ku jira qanjaruufo (qanjaruufo), taas oo ah, in ay ka saarto caleemaha sii kordhaya ee treetops. Ku dhejisid ciddiyaha, iyo mararka qaarkood, marka ay ka saarto inta badan baxsashada, go'doomin.
Natiijadu waxay keentay, in fooriddu ay saameyn weyn ku leedahay geed. Wakhti dheer ayaa loo qoondeeyay in la sameeyo habkan. Laakiin geeddi-socodka ku-qorista ayaa ka dhigaysa mid dhaqaale badan oo lagu isticmaalo nafaqooyinka gala geedka. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah marka qanjaruufo, dhererka loo baahan yahay ee caleemaha waxaa lagu gaari karaa iyada oo la hakiyo koritaankiisa, halka bucshida hal sano ah la gaabiyo guga soo socda, qayb muhiim ah oo ka mid ah ayaa la saaraa, si loo abuuro waxyaalaha nafaqada hore loo isticmaalay.
Waxyeellada miraha miraha si ay u xoqdo waxay ku xiran tahay muddada:
• Haddii dhirta la qaado inta lagu jiro xilliga koritaanka xooggan (bisha June), ka dibna koritaanka caleemaha dhakhso u koraya ayaa dib u dhacaya. Tani waxay keenaysaa qaab cusub, laga bilaabo burooyinka axillary ee caleemaha caleemaha, caleemaha xilliga xagaaga, iyo sidoo kale koritaanka caleemaha daciifka ah, oo ku yaal meel aan ka fogeyn caleemaha taas oo lagu qabtay, iyo caleemaha caleen ayaa loo beddelaa midhaha. Waxaa muhiim ah in la xasuusto in khafiifinta aan saameyn aad u wanaagsan on xilliga sii kordhaya ee geedka, taas oo ka dibna saameeya jiilaalka ee warshadda.
• Sidoo kale qanjaruufo ayaa sidoo kale la qabtaa dhamaadka korodhka kobaca. Natiijo ahaan, korriinada korriinka waxay hagaajineysaa iyo burooyinka axillary waxay horumarinayaan.
Geediga dayrta: waa maxay nuxurka iyo wajiyada waaweyn
Xilliga dayrta xilliga dayrta waxaa la sameeyaa laga bilaabo dhammaadka Agoosto ilaa bartamihii Sebtembar. Ku qaado kaliya kaliya noocyo dhexdhexaad ah ama hore ah isteroberi, taas oo, sida caadiga ah, waa kuwo dheer. Haddii geeddi-socodkan loo fuliyo si sax ah oo sax ah, markaa sannadka soo socda waxaad heli doontaa goosashada aad u weyn.
Xeerarka aasaasiga ah ee jarista isteroberi xilliga dayrta
• Ma jiro wax degdeg ah oo aan gooyo geedka, sababtoo ah xaqiiqda ah in ay ku tuuri doonaan dhammaan ciidamadooda si dhakhso ah u soo kabashada waxayna bilaabi doonaan caleemo qulqulaya oo badan, taas oo hal sano oo sano ah ay kor u qaadi doonto dherer hore. Xulashada ugu wanaagsan waxay noqoneysaa in la kala qeybiyo nidaamkan dhawr jeer, tusaale ahaan, hal qeyb waa in la gooyaa dayrta tan iyo xiga waa in la gooyaa.
• Gooyo xilliga dayrta waa in loo sameeyaa heerkul ah 0 ° C.
• Marka hore, ka saar caleemaha koraya 90 ° xagasha jirka. Ka dib markaa kuwa soo koraya si isku mid ah ama si siman loogu qoondeeyo garab ayaa la saaraa.
• Waa muhiim in la ogaado marka marka la gooyo laamaha, ha jarin xad-dhaafka oo ha ka tagin jirridda. Calaamad ku jirta tani waa qulqulka kaabiga ah ee jilif, kaas oo si cad u muuqda saldhigyada laamaha sii kordhaya. Waa meeshan in ay jiraan unugyo si ay u bogsadaan oo u soo celiyaan alwaax si gaar ah. Haddii jirku ka tago ama laamuhu aad u jajaban, geedku wuxuu bogsiin doonaa muddo dheer.
• U jarida laan ka badan 3 cm qaro weyn waa in la sameeyaa sida soo socota: si aad u bilowdo, ka gooyso xagga hoose, kadibna markaa waxaad ka gooyaa dusha sare. Haddii tani aan la tixgelin, caleenta hoostiisa ee lakulanka laydhka waa la burburin karaa, sababtoo ah xaqiiqda ah in qaybta aan doped ay jebin karto miisaanka miisaankiisa.
• Sida manjada guga, booska sawirka waa in lagu daaweeyaa garoonka beerta ama walxaha kale ee gaarka ah. Haddii aan la sameynin, geedka ayaa bilaabi doona inuu ooyo, taas oo keeneysa soo jiidashada cayayaanka kala duwan oo waxyeeleynaya geedka.
• Kadib markaad gooysid, waa inaadan quudin geedka, maadaama geedku uu ka qaadi doono qaybaha nafaqada leh ee ka soo baxa xididdadiisa.
Manjooyin xilliga qaboobaha: ha ahaato ama ha u isticmaalin waqtigaan, iyo sida ay u saameeyeen geedaha
Geedka budada ah ee mudadaas laguma talinayo. Sababtoo ah heerkulka jiilaalka hooseeya wuxuu yeelan karaa saameyn aad u xun geedka. Lafaatiirta la gooyo, ma aha oo kaliya waqti uma baahna inay bogsadaan, laakiin sidoo kale waxay u dhintaan dhaxan. Geedo jiilaalka waxaa la fuliyaa laga bilaabo bilawga November ilaa bilowga Maarso, marka geedku yahay nasasho.
Tilmaamida jiilaalka qaboobaha
• Marka la eego dhammaan muddooyinka dhirta, waa in lagu sameeyaa koontorool, mashiinka ama mashiinka.
• Waa lagama maarmaan in la bilaabo manjooyin adoo ka saari doona iskutallaabta, dhimashada, daciifka ah iyo xoqidda, jirridda iyo dhaawacyada.
• Waa lagama maarmaan in dhexda geedka loo furo si looga saaro laamaha waaweyn. Haddii aad u baahan tahay inaad ka saarto dhowr laamood oo waaweyn, markaa nidaamkan waa in loo qaybiyaa dhawr xilli jiilaal.
• Xilliga jiilaalka, waxaad ka saari kartaa laamiyo aad u ballaaran oo ka qaadaya dhererka geedka.
• Caadi ahaan isugeynta Febraayo at -15 ° C.
• Waxay bilaabaan nidaamkan iyada oo leh pear-old, maadaama ay burooyinkoodii soo tooseen ka hor kuwa dhallinyarada ah.
• Si nabarka si dhakhso ah loo bogsado oo aan la qaboojin xilliga jiilaalka, waxaa muhiim ah in la isticmaalo qalab nadiif ah oo qalabaysan, kadibna manjooyin si loo daaweeyo nabarrada leh cunto karis ah.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan noocyada of pears columnar.
Nidaamka of manjooyin casaan iyo da 'yar yar, waa maxay kala duwanaanshahooda. Nidaamka xoqitaanka roodhida, iyo qalabka loo isticmaalo geedi socodkan
Geedo geedo ayaa loo sameeyaa si loo hagaajiyo wax soo saarka beeraha iyo si aad u hesho iftiinka qorraxda. Agrotechnics waxay sheeganayaan in dhirta la jarayo ay yihiin mawduuc yar oo farsamo ah. Gooyo waxaa la sameeyaa labadaba caws iyo da 'yaryar labadaba, sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan mid kasta oo ka mid ah geeddi-socodka aad akhriyi doonto hoosta, iyo sidoo kale qalabka loo baahan yahay tan, iyo habka loo isticmaalo manjooyin.
Dhammaan bur-burinta lagu jeexayo pear gaboobay ama sida loo kordhiyo nolosha geed
Gubashada liidata ee isdabajoogga hore waxay mararka qaar waxyeelo u geystaan ​​geedo bacrin ah. Laakiin inta badan, si ay u soo noqdaan caafimaad, foomka iyo fruiting warshad, waxaa lagama maarmaan ah in la fuliyo tallaabooyinka anti-gabowga, kaas oo la jarayo isteroberi. Mararka qaar beerta waxay ka timaadaa hal mulkiile oo kale, ugu horeyntii marna ma daryeeli geedaha, sababtoo ah waxay koray dheer, laakiin midho yar. Si arrintan loo sameeyo, u samee waxqabadyo ku saabsan manjooyin cusub oo isteroberi ah.
Mararka qaarkood waxaa jira baahi loo qabo in la gooyo pear ah haddii geedku kor u kacay. Oo haddii pear loo daryeelo oo dhererkiisu u dhigmaa dhererka caadiga ah ee goosashada, ninkii beerta ka shaqaynayay wuxuu bilaabayaa geedi socodka dib u soo nooleynta geedkii isagoo khafiifinaya taajkii. Dhacdadani waa inay bilaabataa dhammaadka jiilaalka ama horraanta gu'ga, kahor inta caleemaha iyo burooyinkeeda ay bilaabaan inay sameeyaan.
Marka hore, jarjar burooyinka jiran, jaban, la qaboojiyay iyo kuwa aan qallajineynin. Tani waxay u oggolaanaysaa in qorraxda qoraxda si fiican u iftiimiso taajkii geed, waxaad kaloo arki doontaa inta harsan ee shaqada ee loo baahan yahay in la sameeyo. Markaas ka saar caleemaha xad-dhaaf ah, caleemaha sii kordhaya xagal ba'an ama barbarro ah taajkii geedkii, iyo sidoo kale caleemaha la tartamaya. Qaar ka mid ah caleemaha soo haray waa la gaabin karaa, ka dibna daawee nabarrada cusub ee dib u milicsiga.
Haddii aad si habboon u noolaato pear jir, ka dibna waxay ka badbaadin kartaa geedkii laga soo jaray. Wax walba waa suurtogal in dib markii dib u soo kabashada ee pear jir, ma keeni karto dalag weyn oo marka hore, ama xitaa siin midho yar, laakiin ha ka xanaaqin, ma aha weligiis.
Gooyo isteroberi dhallinyaro ah, waa maxay waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ogaato marka aad qabanaysid dhacdadan
Geediga ugu horreeya iyo ugu muhiimsan ee isteroberi yar yar waxaa lagu fuliyaa isla markiiba ka dib markii laga beerto seedling oo isla markiiba sameeyo laba hawlood:
• Marka dhirta la beeray, nidaamka xididkiisu waa uu dhaawacmay, nafaqadana waa la hagaajin karaa iyadoo la yareeynayo laanta.
• Wareegga koowaad ee nidaamka xoqista pear, yaraynta kiciyaha.
Xilliga dayrta, sannadka abuurista geedo pear, manjooyin aan la fulin, ma jirto baahi loo qabo. Haddii aad si sax ah u sameeyaan sanadka ugu horeeya ee manjooyin jiiska, ka dibna mustaqbalka sapling si fiican u koraan iyo laab laab taajkii, u baahan tahay oo kaliya manjooyin caleemaha jir ah. Marka la gooyo pear yar, waa inuu ka kordhay caleemaha laysku qurxiyey, taas oo saameyn ku yeelan doonta korriinshaha geedka.
Fischerer-ka cusub oo ka weyn hal sano ayaa la qaadaa 2 jeer sannadkii, taas oo aad u saameeya kororka branching, dhismaha laamaha semi-skeletal on kaas oo laamaha miraha koraan. Si arrintan loo sameeyo, waa la soo gaabin doonaa 25% wadarta guud. Next, bannaanka u baahan yihiin in ay fiiro gaar ah u dushooda. Waxaa loo sameeyaa si joogta ah, gaar ahaan xilliga qaboobaha.
Toogashadu waxay si dhakhso ah u koraan laanta waaweyn, taas oo si weyn u qarinaysa taajkii geedka, sidaas guga waxay u beddelaan laamaha cawska iyo kuwa lafaha ah, qaarkoodna waa in la gooyaa. Haddii xilliga jiilaalka ay jiri lahaayeen dhaxan daran, iyo qoryaha ka sarreeya dushooda dushooda iyo caleemaha si xun u koraan geed, ka dibna caleemaha on lafaha skeletal horumarinta liidata. Markaa waxaad u baahan tahay in aad gooyo dhamaan wixii ka sarreeya dushooda.
Laga soo bilaabo qeybtii labaad ee la sameeyey laamo, taas oo ku kordhinaya dib u soo celinta taajkii geedka. Sannaddii afaraad ee nolosha pears dhallinyarada, dul dhig heerka labaad. Sannad shanaad kadib, kobaca sanadlaha ayaa hoos u dhigi doonta, sababta oo ah taasi waxay yareysaa laanta laamuhu waxay u baahan tahay in si dhexdhexaad ah loo sameeyo.
Nidaamka xoqitaanka roodhida ama sida ay u dhacdo
Dhalinyaro yar yar, oo ah hal sano, jirku waa la jarayaa ilaa 25% wadarta guud, tan waxaa loo sameeyaa laanta taajka. Caleemaha dhinaca ayaa sidoo kale loo soo gaabin, laakiin kaliya in ay ku hari kalluunka. Sannad kale oo ka mid ah nolosheeda, dusha sare ee jirka waa la jaraa 25-30 cm, laamahana waa la jarjarey 6-8 cm Si loo sameeyo qaabka geedeedka, waa laamaha hoose ee waa in laga tagaa muddo dheer. Wixii fruiting wanaagsan, qaabka geedka waa in ay ku jiraan qaab Ahraamta ah.
Ka dib marka la gudbiyo geeddisocodka waxaa lagu fuliyaa laba marxaladood:
• Heerka koowaad ee nadaafadda waa bisha March. Nuxurkiisa waa ka saarista laamaha qalalan iyo kuwa buka.
• Marxaladda labaad ee la sameeyo, waxay dhacdaa qiyaastii laba toddobaad kaddib marka ugu horreysa. Marka koraan pear, heerka ee caleemaha u muuqdaan daciif. Ka dibna manjooyin qaabaysan ama muhiim ah ayaa la sameeyaa saddexdii sanaba mar.
Qalabka loo isticmaalo jaridda isteroberi
Qalabka ugu muhiimsan ee geeddi-socodka, ninkii beerta oo dhan, waa garsoore Waxaa loo isticmaalaa in laga saaro laamaha oo leh dhumuc of 2 cm dhexroorka, iyo kuwa qaro weyn u isticmaalaan lopper. Farqiga u dhexeeya gooyo budo iyo saliideed waa in kan koowaad uu ka dheer yahay gacanta.
Beerta qaar ka mid ah samaynayaa manjooyin mindi - way adag tahay. Waxa ugu muhiimsan ee uu ku lahaa shey wanaagsan, oo fiiqan. Waxaa sidoo kale jira mindiyo beerta gaarka ah loogu talagalay manjooyin yar yar, kuwaas oo loo isticmaali lahaa halkii budada.
Waxa kale oo loo isticmaalaa xoqista iyo miinada. Waxaa loo isticmaalaa in la tumo laamaha waaweyn. Laakiin u adeegso beerta gaarka ah u arkay, oo ma fududa. Isbadalkooda waa in beerta loogu talagalay in lagu yareeyo laanta laamaha. Qalab kastoo beerta ah waa inuu ahaadaa mid fiiqan oo nadiif ah.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Geedka Naddiga 2019